Mananjo hiaro tena ny tsirairay
dimanche, 02 décembre 2018 23:59
Eo anatrehan'ny lalàna indrindra fa fitsarana ady heloka na ady heloka be vava, toy ity raharaha miaramilan'ny primatiora nilako avocat ity.
Eto dia tsy miaro na iza na iza fa tsara ihany koa isika mahalala, na fohy aza, ny resaka fiarovana.
Ny Avocat na Mpisolo vava dia tsy mpiasam-panjakana ary tsy rafim-panjakana. Antsoina hoe Auxiliaire de justice izy. Izany hoe manampy izy ny fitsarana hitady ny marina ao anatin'ny fiarovana izay client, na voapanga, na mpitory, arovany.
Aloa vola izany io asany io.
Nametraka kosa anefa ny lalàna fa tsy tokony hiankina amin'ny fananam-bola na tsia ny fahazoana miaro tena, ka rehefa tsy manana Mpisolo vava ianao amin'ny ady heloka dia didin'ny fitsarana ny Mpisolo vava iray hiaro anao. Io ilay antsoina hoe Avocat d'office. Tsy midika izany fa anao asa lasafay io mpisolovava io.
Olona efa hitapoko hitam-pirenena fa nilako sy nanambana basy kosa ve, sady amin'izay avocat koa ilay voa dia mbola harovana ihany. Iza ny avocat hiaro azy amin'izany nefa ny avocat mitovy aminy aza nolakoiny ?
Endrika ivelany izay, fa voalohany aloha, tsy tao anaty fotoana niasany ity voalako ity, tsy nisy fifandraisany tamin'ny dossier na client narovany, ary mety tsy ho fantatr'ilay mpilako akory aza izy hoe Avocat tamin'io, fa rombo raikitra nivoaka ny boite de nuit.
Noho izany tsy misy idiran'ny maha avocat azy ity raharaha ity. Ny syndicat des avocats sy ny ordres des avocats izany dia tsisy idirany na kely aza. Ny syndicats mety afaka hitory amin'ny maha samy corps azy, fa azon'ny fitsarana lavina ny fitoriany.
Nisy fandratrana sy ambana basy kosa ny raharaha, dia afaka manao autosaisine na mitory ny Parquet mpampanoa lalàna, fa amin'izay raha tsy nitory ilay niaram-boina dia miala maina izy amin'ny honitra na dommage intérêt satria izy tsy nitory. Ka na ny fitsaboana azy na ny fiara potika dia miala maina.
Etsy ankilany kosa, dia tsy misy lalàna mandrara izay avocat alain'ireo nilako hiaro azy. Ny mpisolovava eo zany dia tsy mahazo mandainga. Manosika ny olona arovany hilaza ny marina rehetra aza no tokony hataony. Ka ny asan'ny Avocat eo dia ny hitady fanalefahan-tsazy na ny circonstances atténuantes.
Ohatra, mamo tsy tompon'ny tenany ny olona arovany. Nentin-katezerana tsy voatana izy noho ny fiantsiana, na ny fanitsahana tamin'ny fiara niniana natao ny tongony. Niaro tena izy na legitime défense.
Ny mpitory tsy maintsy amaly fa efa à terre sans arme izy no nodakana sy nambanana basy....
Ny fitsarana tsy maintsy hitady ny vavolombelona rehetra, ny sécurité boite de nuit...
Tsy tokony ho gaga izany isika, na tsy hisy tsindry na kolikoly ny didy mety avoakan'ny fitsarana.
Isika manko mora entim-po, ary misy mpanao politika mandrisika amin'izany hoe, vao tsy miditra Tsiafahy io dia fitsaram-bahoaka satria kolikoly sy zanaka jeneraly mahitahita.
Aza adino fa amin'ny anaran'ny vahoaka Malagasy no amoahan'ny mpitsara ny didiny ka efa vitany izany ny fitsaram-bahoaka fa tsy isika no hitsara.
Raha misy tsy afa-po amin'ny didy dia afaka mampakatra na koa mangataka amin'ny fitsarana amboniny andravana iny didy nivoaka iny.
Tokony rahampitso no entina eo anivon'ny fitsarana ireo voapanga.
Ny zavatra mety hiseho dia samy nitory ny roa tonta na plainte reciproque. Tsy maintsy angatakany avocat hoe tsy tokony andeha hila satria affaire iray ihany no nifampitoriana, ka angataka jonction de dossier, na fanambarana ho tokana ny fitsarana ny fitoriana nataon'ny andaniny sy ankilany.
Midika izany fa angataka LP ny voapanga mandram-pahavitan'ny enquête dossier 2.
Mbola tsy fitsarana eo fa fihainoana voalohany ny tsirairay. Ny mpitsara efa manana ny enquête nataon'ny BC eo indrindra fa ilay fitoriana ilay nidaroka.
Azon'ny mpitsara, tonga dia ampidirina am-ponja vonjy maika eo ny voapanga. Raha mitombona ny fitoriana roa dia na samy migadra vonjy maika na samy votsorana satria tsy atahorana hifanao vangeance na hisy andositra.
Miasa mafy eo zany ny avocat n'ny roa tonta. Afaka tsy maka Avocat ilay avocat, nefa azo antoka fa hiroboka anampy azy avokoa ireo avocat marobe hi se constituer, zany hoe milaza eo anivon'ny fitsarana fa mpiaro ny mpitory.
Mirary soa ary aoka ho tony sy atoky ny Fitsarana.